Lammaanahaygu aniga qorshe ilama sameeyo: sababo, talo iyo inbadan oo badan | Ragga Stylish
Lammaanayaasha mararka qaarkood waxay wada sameeyaan qorsheyaasha badankood. Waana in dad badani awood u yeeshaan inay khibrado cusub ku yeeshaan nolosha lana wadaagaan lamaanaha waa muhiim. Waxaan ku heli karnaa nafteena xaaladda qofka aan xiriirka la leenahay uusan u dooneyn sida aan dooneyno inaan tijaabino oo aan u sameyno wax ka duwan sidii looga bixi lahaa nolol maalmeedka. Waa wax caadi ah in la arko dad sheeganaya in lammaanaha uusan qorshe la sameyn isaga ama iyada. La sameynta qorshooyin lammaanahaaga waxay noqon kartaa wax aad u adag mararka qaarkood.
Sidaa darteed, waxaan ku siineynaa sababaha qaar sababta lammaanahaagu aanu qorshe kula samayn maxaase xal u noqon kara.
1 Sababaha uusan lammaanahaagu qorshe ula samayn
2 Soo jeedi qorshayaal
3 Lammaanahaygu wax qorshe ah igama sameeyo: miyuu iga joogsaday jacaylkayga?
Sababaha uusan lammaanahaagu qorshe ula samayn
Arrinta xiisaha lihi waxay tahay ka hor inta aadan qof la kulmin, waad ogaan kartaa naftaada, fahmi kartaa dhadhankaaga, hiwaayadahaaga iyo waxa aad rabto inaad waqtigaaga ku bixiso. Markaad xiriir jacayl la leedahay lamaanahaaga, waxaad sidoo kale mari kartaa hanaankan is-baraarujinta ah. Haddii aad la kulmeyso qofkaas oo ay kugu adag tahay inaad ku heshiiso qorshe, ama iyagu aysan aad u daneyneyn inay qorshe dejiyaan, is weydii haddii ay tahay natiijada shaqsiyaddooda iyo qaab nololeedkooda, haddii ay tahay dad kale awgood ama runti ma jecla inuu wax badan kula wadaago.
Mid ka mid ah sababaha ugu badan ayaa ah in qofku yahay mid madax bannaan. Haddii aad tahay qof aad u madax bannaan oo aad weli isbaraneyso, waxaa fiican inaad qiimeyso haddii aad rabto inaad xiriir jaceyl la wadaagto qof noocaas ah oo madaxbannaan. Waxa ugu muhiimsani waa in la awoodo in loo hadlo si xushmad leh oo deggan, iyo in la helo meel dhexe oo u dhaxeysa labadooda. Xiriirka lamaanaha, dheelitirka waa in la helaa kiisaska badankood, iyadoo ku xiran hadba dhinacyadeeda, way ka dhib badan tahay sida muuqata.
Dhanka kale, haddii lamaanahaagu uusan dooneynin inuu kula wadaago qorshooyinka, waa inaad si qoto dheer ugala hadashaa waxa jooga iyo mustaqbalkiina lammaane iyo baahiyahaaga. Ma jiro waqti la qiyaasi karo, ma jiro tiro celcelis ah oo qorshe ah oo aad la sameysid lammaanahaaga, marka la soo koobo, xaalad kasta waxay la jaanqaadeysaa baahida qof walba waana inaad ka heshaa wada noolaansho waaya-aragnimada guud iyo tan shaqsiyeed. Haddii lammaanahaagu uusan dhab ahaan rabin inuu wax kula sameeyo, xiriirkaas macno ma sameynayo. Haddii aadan wada qaadan karin waqti tayo leh ama wadaagi karin khibradaha, laga yaabee inay tahay Waqtiga si dhab ah looga fiirsado waxa xiriirkaasi kuu keenay iyo haddii aad runtii rabto inaad sii wado.
Soo jeedi qorshayaal
Haddii saaxiibkaa / saaxiibtaa uusan soo jeedin qorshe, waad soo jeedin kartaa naftaada. Marka waad arki kartaa sida ay uga falceliyaan talooyinkaaga. Si kastaba ha noqotee, xusuusnow in xiriirka, labada dhinacba ay tahay inay wax ku darsadaan. Fikrad ahaan, mid ama labaduba waxay leeyihiin qorshe. Haddii lamaanahaagu uusan wax fikrad ah ka lahayn abaabulka qorshe, waad qaadan kartaa doorkan, illaa iyo inta lammaanahaagu uu qaadanayo kaalin kale, sida abaabulka iibsiga inta aad qorsheyneyso qeybta raaxada. Ama shaqo kale, laakiin had iyo jeer isku dheellitiran kuna soco isla heer iyada oo aanad "u jixin" iyada.
Badanaa, astaamaha ugu waaweyn ee lammaanuhu waa fahamka dhadhankooda, hiwaayadaha ay leeyihiin, iwm. Waxay kuxirantahay waqtigaaga firaaqada, hadii aad caruur leedahay, waxay kuxirantahay hiwaayadahaaga, iwm, waxaad qori kartaa dhamaan waxyaabaha aad rabto inaad wada sameyso bishii ama jeer kabadan. Sababtaas awgeed, waxaa muhiim ah in la kala siiyo labada si loo helo dheelitirnaanta xiriirka oo labada dhinacba ka dhig mid raaxo leh.
Haddii dhadhankaagu gabi ahaanba iska soo horjeedo oo ay kugu adag tahay inaad oggolaato oo aad bilowdo qorshe ama waxqabad, waxaad isku dari kartaa inaad samayso hal ama laba qorshe oo lammaanahaagu doorbido iyo hal ama laba qorshe oo aad doorbideyso. Waxaad sidoo kale raadin kartaa qorshooyin labadiinuba jecelyihiin iyo / ama ka soo baxa nolol maalmeedka. Sirta ah inaad qorshe cusub la sameysid lammaanahaaga asal ahaan waa hal-abuur, dabacsanaan, iyo sii deyn.
Lammaanahaygu wax qorshe ah igama sameeyo: miyuu iga joogsaday jacaylkayga?
In kasta oo bilowga xiriirka wax waliba qurux badan yihiin, iyadoo waqtiga laga gudbo caado iyo kalgacal ay la wareegaan xiriirka. Waxyaabaha qaarkood waxay bilaabayaan inay isbedelaan. Caadi ahaan lamaanayaashu way ku meeraystaan ​​iyaga, iyagoo qorsheynaya noloshooda had iyo jeer ku tiirsan qofka kale. Si kastaba ha noqotee, haddii ay dhacdo in lammaanahaagu uusan qorshe la sameynin, waa inaad ogaataa haddii sababta ay tahay inuu joojiyay jacaylkaaga.
Kaliya maahan in xiriirka la xalliyey, laakiin in badan oo ka mid ah labada lamaane ayaa si dhib yar u qaata muujinta lama filaan ah ee kalgacalka. Waxay muujisaa dhunkasho, salaaxid, isku duubid, iwm. Hada guryo ayaad iska shumisaa oo waxaad heleysaa sidee tahay. Isaga oo aan u qabin isla jacaylka lammaanaha, isagu ma doonayo inuu qorshooyin kula sameeyo. Wuxuu had iyo jeer oran doonaa inuu mashquul yahay in kasta oo ay jiraan waxyaabo uu sameeyo. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa cudurdaar sida inaad daalan tahay, waxaad dareemeysaa fiicnaan, in kastoo xanuunka iyo daalku ay baaba'aan marka soojeedimaha ay ka imaanayaan qof kale ama ka baxsan bu'dayada guud.
Sidoo kale kuma jirto dadkaaga. Waa tallaabo labadii hore la qaaday. Waxaa laga yaabaa inaad soo jeedinayso wax aad sameyso in mudo ah waxay noqon laheyd qorshe qumman labadiinaba, laakiin hada waxay isku dayeysaa inay kuu sheegto inay leedahay jadwal ciriiri ah oo aysan la kulmi karin. Waa calaamad muujinaysa inaad isku dayeyso inaad ka carartid xiriirka. Xidhiidhka jidhku sidoo kale wuu yaraaday kulamada sokeeyana way ka badan yihiin goos gooska. Waa run in lammaanaha ugu horreeya ay ilaaliyaan laxanka galmada oo aan caadi ahaan caadi ahayn. Badanaa waa natiijada sare ee bilowga. Si kastaba ha noqotee, waxay uga sii gudubtaa geesba gees. Waxaad ogaatay in lammaanahaagu kaliya uu kaa doonayo adiga oo galmo sameeya iyo wax kale oo yar. Jacaylka, u heellanimada iyo habeennada xamaasadda leh ayaa maalmahoodu tiro leeyihiin.
Ugu dambeyntii iyo tan ugu muhiimsan, waa inaad tixgelisaa haddii qofka kale uusan dhibsanayn ama uusan ka walwalsanayn dhibaatooyinkaaga. Mid ka mid ah tiirarka lamaanaha waa taageerada, masruufka iyo hoyga. Haddii garabkiisa hadda ka dib adigu aad heli karin oo uu isku dayay inuu yareeyo waxa uu kuu hayo, wuu joojiyay jacaylkaaga.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto sababta lamaanahaaga uusan qorshe ula sameyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Lammaanahaygu aniga qorshe ilama sameeyo